चामल नहुँदा रित्तो हात फर्केका भन्छन् ः चामल कहिले आउछ बाबु ? – Nepalpostkhabar
चामल नहुँदा रित्तो हात फर्केका भन्छन् ः चामल कहिले आउछ बाबु ?
Hemant KC । २ बैशाख २०७७, मंगलवार १०:४५ मा प्रकाशित
जाजरकोट , “कहिले आउछ चामल , दिनकै आउनले खुट्टा दुख्ने भईए , छिटो चामल पढाईदिनु पर्र्यो बाबु फोनमा चामल छ की छैन भनेर सोध्ने मात्र होईन ” यि वाक्यहरु हुन् जुनिचाँदे गाउँपालिका –११ ताँगाकी मैना थापाका ।
उहाँ मात्र होइन् , ताँगा आसपासका दर्जनौ गाउँलेहरु चामलका लागि दैनिक खाद्य डिपो भएको ठाउँमा आएर बन्द कोठा हेदै जाने गरेका छन् । खाद्य व्यावस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जाजरकोटले ताँगाको लागि निर्धारण गरेको कोटा सकिएका कारण सो ठाउँमा चामल पठाउन सकेको छैन ।
जुनिचाँदे गाउँपालिका जिल्लाको अति दुर्गम क्षेत्रका रुपमा परिचित छ । यहाँ खेतीयोग्य जमिन काम भएकाले खाद्यान्न उत्पादन समेत कम हुँने गरेको छ । ताँगामा चामल लिनका लागि ढुवानी भाडा नभएको कारण लिन समस्य भएको कम्पनीका जाजरकोट प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो ।
पुरानो अन्न सकिएको र नयाँ गहुँ बाली नपाकेकाले दैनिक छाक टार्ने समस्य भयो , जुनिचाँदे गाउँपालिका – १० का पदम खड्काले भन्नुभयो, “ हाम्रो ठाउँमा सिंचाई गर्नका लागि पानी भएपनि खोलामै छम ,छम बग्छ , हामीसँग पैसा छैन त्यो पानी खेतबारी सम्म ल्याउनका लागि ? कोरोना भाईरस कारण ‘लक डाउन’ हुँदा दैनिक आउने चामल बन्द भएको छ । ”
बजार जानका लागि बन्द छ , नजाउ भोको पेटले मान्दैन उहाँले थप्नुभयो , “ सरकारले अनुदानमा दिने चामल कहिले आउछ थाहा छैन , गाउँपालिकाले ल्याएको चामल सवैलाई दिदैनन् , न त खोजीमा दाम छ । ” काम गर्नका लागि गाउँमा विकास निर्माणका सवै काम ठप्प भएका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने रकम समेत जुटाउन स्थानीयवासीलाई हैरान भएको छ ।
त्यस्तै जिल्लाको बारेकोट गाउँपालिकामा रहेको घाट डिपोमा समेत चामल सकिएको छ । शनिबार झण्डै २ सय भन्दा बढी गाउँलेहरु कम्पनीको कार्यालयमा गएपनि आधा सर्वसाधारण चामल नपाएर फर्कीएको बोरेकोट गाउँपालिका तोलखानाका डम्वर सिंहले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार चामल नपुगेकै कारण धेरै स्थानीयावासीहरु फर्कनु परेको थियो । गाउँपालिकालाई तुरुन्तै खाद्यान्नको व्यवस्था गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( नेकपा) बारेकोट गाउँकमिटिले आग्रह गरेको सिंहले बताउनुभयो । बारेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्षले महेन्द्रबहादुर शाहले चामल हुनुपर्ने हो , मलाई , एकिन थाहा भएन बुझेर खवर गर्ने बताउनुभयो ।
बारेकोटमा खाद्यान्न ढुवानी गर्ने ठेकेदारले फागुन १५ सम्म २ हजार क्वीन्टल चालम ढुवानी गरीसक्ने सम्झौता गरेपनि अहिले सम्म ढुवानीको काम पुरा नगरेको कम्पनीका प्रमुख धर्मबहादुर बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । अहिले कार्यालय आफैले जवरजस्ती केही चामल खच्चडमा पठाएको उहाँको भनाई छ । दुवै गाउँपालिकामा खाद्यान्न ढुवानी गर्न समेत महंगो पर्ने गर्दछ । उत्पादन समेत कम हुँने स्थानीय तहहरु हुन् ।
पुलमा ताला , सडकमा बारले दैनिक उपभोग्य वस्तु लिन मुस्किल
जाजरकोट – डोल्पा सडक खण्डको बिभिन्न ठाउँमा रहेका झोलुङ्गे पुलमा ताला लगाई आवतजावत ठप्प पारिएको छ ।
कोरोना भाईरस ( कोभिड –१९) बाट जोगिन र जोगाउन भन्दै सडकमा बार र पुलमा ताला लगाएको हो ।
प्रत्येक पुल र नाँका क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मी राखेर विरामी बाहेक अन्यलाई प्रवेश बन्द गरिएको छ । जिल्लाको नलगाड नगरपालिका –७ चामेखेत , वडा ८ को वगरा , वडा ११ को तल्लु लगाएतका ठाउँमा रहेका झुलुङ्गे पुलमा ताला लगाएको हो ।
रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिका सँग जोडिएका यि सवै ठाउँको बीचमा भेरी नदी रहेको छ ।
त्यस्तै डोल्पा , जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको बीचमा रहेको त्रिवेणीमा समेत पुलमा ताला र सडकमा बार लगाएको हो । अनाआवश्यक हिडडुल गर्ने व्यक्तिलाई निश्चित कारण खुलाएर मात्र जान दिएइएको नलगाड नगरपालिकाका नगरप्रमुख टेकबहादुर रावलले बताउनुभयो ।
त्यस्तै जाजरकोट र रुकुमको बीचमा रहेको रिम्ना मोटर गुड्ने पुलमा प्रहरी परिचालन गरिएको छ । कुनै पनि कामले आउने सर्वसाधारणलाई स्वास्थ्य जाँच गरेर मात्र जान र आउन दिइएको छ । त्यस्तै भेरी नगरपालिका कुदु र चोरजहारी नगरपालिकाको अस्पताल नजिक रहेको पुल , मटेला पुलमा समेत आउन , जान प्रतिवन्ध लगाएको छ ।
सुरक्षा व्यवस्था कडा भएका कारण खाद्यान्न लगायतका सामग्री लिन समेत निकै समस्य भएको नलगाड नगरपालिका –८ का नेत्र विसीले बताउनुभयो । जोगिने र जोगाउने अवस्थामा सधै सवै जनाले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पंञ्च भयार मावि नलगाड नगरपालिका –८ का शिक्षक बीरबहादुर खत्रीले बताउनुभयो ।
गाउँबाट तरकारी , दुध र दही समेत ‘लक डाउन’का कारण वजार सम्म आउन नसकेको खत्रीले बताउनुभयो । बजारमा अहिले कुनै पनि सामग्री पाउन सक्ने अवस्था नभएको उहाँको भनाई छ । सदरमुकाममा कृषकहरुले छाटफुट केही सामग्री लिएर व्यक्तिगत रुपमा विक्री गरेपनि त्रासका कारण आउन नमानेको बताएको छ ।